Fitsapana mialoha momba ny Windows 10X voalohany amin'ny MacBook | Avy amin'ny mac aho
Fitsapana mialoha momba ny Windows 10X voalohany amin'ny MacBook
Ny maha-universal an'i Windows dia manamora ny fametrahana azy amin'ny Mac. Tsy hiditra amin'ny ady isika raha tsara kokoa na ratsy kokoa noho ny macOS. Samy manana ny tiany sy ny tiany ny tsirairay. Ny tombony ananan'ny mpampiasa Mac dia ny ahafahantsika mametraka système d'exploitation amin'ny masininay. Azo atao ihany koa ny mifamadika, miaraka amina fanahafana tena manokana, saingy sarotra kokoa.
Windows miasa ho an'ny solosaina efa misy rehetra. Manana mpamily saika ny singa rehetra amin'ny solosaina izy io. Raha ampiantsika amin'izany fa ny processeur sy ny chipsets mamorona Mac dia tsy manana exclusivity amin'ny Apple (Intel CPUs, Intel GPUs ary Nvidia) dia nanome toky izahay fa mifanentana. Microsoft dia efa namoaka ny Windows 10X Preview ary efa andrana amin'ny Macs izy io. Ary toa mihena be ilay izy.
Saika vonona ny Microsoft ny kinova Windows vaovao izay mampanantena fa ho haingana, azo antoka ary azo antoka kokoa. Windows 10X dia misy ao amin'ny kinovan'ny Preview ary efa notsapaina tamin'ny MacBook. Tsy mbola misy daty famotsorana ny kinova farany an'ny Windows 10X. Ny fantatray dia mandeha tsara amin'ny Mac-nao izy io.
- Sunshine Biscuit amin'ny ambaratonga (@imbushuo) Febroary 13, 2020
Windows 10X Preview mandeha amin'ny MacBook
Raha manana Mac ankehitriny miaraka amina processeur Intel ianao dia afaka mamorona fizarazaran-Windows miaraka amin'ny Boot Camp izao. Avy eo, tsio-drivotra ny fametrahana Windows 10X Preview. Ny vaovao tsara dia mbola misy kinova fitsapana, mandeha amin'ny MacBook tanteraka izy io.
Ny developer @imbushuo dia nametraka an'ity kinova voalohany an'ny Windows 10X Preview ity ary misy hevitra ao amin'ny kaontiny Twitter ny valin'io fitsapana io. Nilaza izy fa tena tsotra be ny fametrahana ary mandeha tsara tokoa. Izy io koa dia manondro fa misy glitches sasany ao amin'ny rafitra, zavatra mahazatra ao amin'ireo kinova fitsapana voalohany.
Manomeza hevitra momba izany Ny ankamaroan'ny mpamily ilainao dia tafiditra ao anaty firmware, ao anatin'izany ireo mamela ny seranan-tsambo Thunderbolt sy touchpad an'ny MacBook. Azo antoka fa ho an'ireo mpampiasa izay te hanana Windows 10X amin'ny Mac azy, vaovao vaovao ity. Raha tianao ny mikorontana dia afaka manomboka izao ianao. @imbushuo dia nanomboka ny làlana ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Bootcamp » Fitsapana mialoha momba ny Windows 10X voalohany amin'ny MacBook
Little America amin'ny Apple TV +. Ahoana ny fahanginana mihoatra ny teny
Tomb Raider amin'ny antsasaky ny vidin'ny Mac